Ukukhetha plumber ekhaya lakho siqu, ufuna ukubona imishini ukuthi kuyinto enhle nje kuphela kodwa futhi esiwusizo futhi ethembekile. Zonke lezi zimfanelo ngokugcweleyo anezindlu zangasese «Cersanit».
«Cersanit» - inkampani abasha okhulele, okuyinto bekwi-ukukhiqizwa zobumba nezenhlanzeko imishini isiqondiso. Le nkampani yasungulwa ePoland ngo-1998. Futhi emzini Kielce futhi etholakala ekomkhulu layo. Igama engavamile luyinhlanganisela amagama amabili "Ceramic" futhi "ukuthuthwa kwendle". Bona ayikwazanga elichaza kangcono yagxila inkampani. ERussia, imikhiqizo wale nkampani athandwa kakhulu. Abathengi kukhona izihloko ajwayelekile ngobumba, izihlambi, yokugezela ifenisha, kanye nezindlu zangasese «Cersanit». Uhlobo yokugcina umkhiqizo emakethe yethu ikakhulukazi baziwa kahle kakhulu. Abathengi njalo ukukhetha okungcono, ngakho isidingo imikhiqizo lenkampani Polish sikhulela njalo. Lokhu kwenza aqine njalo ukhule futhi ukwandisa umthamo production. Kakade, amaphesenti angaphezu kwangu-40 inzuzo zaba ngu nokuthengiswa. Lokho kusho okuningi, futhi kwasekuqaleni - ukuqashelwa emhlabeni jikelele.
NgesiRashiya, izindlu zangasese Polish «Cersanit» ithengiswe cishe engu-40. Izitolo eziningi ezinkulu kanye eziyinxanxathela ozama ukuba le mikhiqizo e okunezinhlobonhlobo zabo. Lokhu kukhetha buyafaneleka, ngoba imikhiqizo baziwa nomkhiqizi Polish has eziningi eziwusizo ezibalulekile:
1) Imikhiqizo zenziwa high quality materials, okuyinto baye badlula wonke amazinga test futhi wathola izitifiketi ezidingekayo. Zihambisana ngokugcwele zonke yaseYurophu ukuphepha kwemvelo kanye nezempilo imikhiqizo izinkomba ezinjalo.
2) Imikhiqizo ekhiqizwa in amabhizinisi ezinkulu kanye nobuchwepheshe besimanje.
3) A ezahlukene avuselelwe nenkambiso ezintsha ezisetshenziswa ngentuthuko lobuchwepheshe esiyingqayizivele. Bocwepheshe bathambekela ngokwengeziwe amafomu classical, okuyinto kwahambisana by an bewumsebenzi kakhulu.
Konke lokhu oluchaza zangasese «Cersanit» futhi kubenza yokufuna enviable.
yangasese «Cersanit» ivelele phakathi imikhiqizo ehlukahlukene. Izibuyekezo zalo mkhiqizo uhlale omuhle kuphela. Phakathi labantu athandwa kakhulu:
embodiments compact ekhuthaza emthonjeni yangasese.
Ngamunye kunezinzuzo zako kanye ezinye izinzuzo. Ngokuvamile, abathengi uqaphele izici ezilandelayo salo lonke umugqa imikhiqizo sanitaryware «Cersanit» toilet:
Ukusebenziseka. Amamodeli zenzelwe ngendlela Kulula kakhulu ukusingatha.
Ukuthembeka. Umkhiqizo ngamunye libhekene namandla ngokukhethekile.
mhlophe abahlukile, okuyinto iqhubeka isikhathi eside.
imikhiqizo Umusa kwahambisana compactness yayo. It oluthatha indawo encane, okuyinto ebaluleke ikakhulukazi izimo zokuhlala encane yesimanje.
Yingakho abantu ngokuya ukuphuma ingaphakathi lakhe sigqoka-room yangasese «Cersanit». Izibuyekezo abanikazi ukukusiza wenze isinqumo esifanele.
Ukuthola amapayipi, abantu ngokuvamile zama ukukhetha onobuhle eyinkimbinkimbi kakhulu futhi zisebenza kahle. Ngakho-ke, iningi abathengi ephendulela ukunaka kwabo ethoyilethi-CD «Cersanit». Kuyinto elula kakhulu futhi kulula ukusingatha. Ngaphezu kwalokho, idivayisi luhlanganisa ngqo futhi yangasese ithangi ukukhipha. Lokhu ukuzixazulula izinkinga ezimbili ngesikhathi esisodwa. Amadivayisi anjalo ingahluka bebheke ukugeleza:
Njengazo zonke izitsha, zenziwa high zobumba. onobuhle Iningi kulekelelwa isihlalo ngesivalo, avamise eyenziwe polypropylene ergonomic. Lokhu kwaziswa ubhekwa uqine ngokwanele. Ngezinye izikhathi isetshenziselwa izihlalo Duroplast. Kuyinto ukumelana imihuzuko, lungekho ukugqwala futhi ngokuphelele kakhulu efudumele uma uyithinta. kudivayisi ezithakazelisayo isetshenziswa kwezinye tinkhulumo, okuthiwa "ophakamisa". It sifana umnyango eduze, esihlinzeka ephakamisa bushelelezi futhi wehlise ikhava. Nkinga touch of a inkinobho, okuyinto ongasebenza ngayo ku izindlela ezimbili.
izinkampani Tech imifanekiso design besebenzisa imiyalelo entsha bese ethembisa. I Ngenxa yalezi zenzakalo kuyinto uhlanganyela yangasese «Cersanit». indlela engavamile lokunamathelisa elisetshenziswa ukwakhiwa yayo, okuyinto efika kuqala hhayi kungase kubonakale enamandla kakhulu. Kodwa lo mbono unephutha. Amamodeli yalolu hlobo awashintsheki ngokusebenzisa ifreyimu ngesikhathi evele ezimbili: odongeni phansi. Lokhu kunikeza kudivayisi eziqinile. I izici ukusebenza amasampula enjalo ukumelana umthwalo 400 kg. Lokhu kwanela ukusebenzisa ekuphileni kwansuku zonke. zangasese uMbusi uhlobo okwesikhashana emelelwa ewumngcingo (ububanzi 50 kuya 55 cm), eliphakathi (55 kuya ku-64 amasentimitha), kanye nezindlela ekhoneni. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba ukhethe oyifunayo, esekelwe umthamo yesikhala samahhala. induduzo engeziwe eqinisweni lokuthi izibuya egumbini lokugezela ngokuphelele free. Kuyinto yokuhlanza lula kakhulu. Izindlu zangasese yalolu hlobo kule nkampani iye yasungula onobuhle ezingaphezu kuka-13. Ethandwa kakhulu kubo: «Olimpia», «Venezia», «Deco», «Delfi», «Eco», «Iruda» futhi «uMongameli».
Emgodini akaphinde asibalele amanzi: zalokho okufanele ukwenze ukuze ulungise inkinga
I single imodi fibre futhi multimode ngokungafani